ကိုယ်၀န်တားခြင်းအားနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်တားနိုင်ပါသည်။သားကြောဖြတ်ခြင်း၊ကွန်ဒုံးသုံးခြင်း၊သားအိမ်အတွင်းတားဆေးပစ်စည်းကွင်းထည့်ခြင်း၊ဆေးကဒ်သုံးခြင်း၊ဒါပေမဲ့လူအများစုသုံးသောနည်းမှာထိုးဆေသုံး၍တားခြင်းဖြစ်ပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကိုယ်၀န်တားခြင်းကာကွယ်မှု့အားထိရောက်ပြီးလွယ်ကူသောနည်းဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့သည် နည်းလမ်းနှစ်ခုကြားရှိခြားနားချက်အာချပြမည်ဖြစ်ပြီး မည့်သည့်နည်းလမ်းသည်သင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကည်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
1. ထိုးဆေသုံး၍ကိုယ်၀န်တားခြင်း(Injection Contraceptives)
ထိုးဆေသုံး၍ကိုယ်၀န်တားခြင်းသည် ယာယီတားခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ရာသီလာသောအချိန်ပထမ5ရက်အတွင်း 1 လခံဆေးနှင့်3လခံဆေးအားတင်ပါးဆုံ (သို့) ပေါင်ရင်း၌ထိုးနိုင်ပါသည်။သို့ပေမဲ့အခြားအကြောင်းကြောင့်ဆေးထိုးရန်လိုအပ်သောအခါ၌ တားဆေးထိုးပြီးနောက် အခြားနည်းလမ်းဖြင့်လည်းကာကွယ်ထားသင့်ပါသေးသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆေးအာနိသင်ထိရောက်မှု့သည် အချိန်7ရက်ကြာပါသည်။
အသုံးများသော ထိုးဆေး2မျိုးရှိပါသည်။၄င်းတို့မှာ
1. ဟော်မုန်းတစ်မျိုးတည်းပါ၀င်သောဆေး ဟော်မုန်းတစ်မျိုးတည်းပါသောဆေးမျိုးစားများတွင် ပရိူကျိုစသရူန်း (Progesterone) ဟော်မုန်းဓာတ်ပါ၀င်၍ မျိုးဉကြွေခြင်းအားကာကွယ်မှု့ပေးခြင်းကြောင့် တစ်ကြိမ်ထိုးလျှင်3လကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
2. ပေါင်းစပ်ဟော်မုန်းတားဆေးများ ပေါင်းစပ်ဟော်မုန်းတားဆေးများဖြစ်ကြသည့် ပရိူကျိုစသရူန်း (Progesterone) အား အက်စ်သရိူဂျင် (Estrogen) နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည့်ဟော်မုန်းတားဆေး များသည် ထုတ်လုပ်သောမျိုးဉကြီးထွားမှုနှုန်းအားမဖွံ့ဖြိုးစေသည့်အပြင် သုတ်ပိုး၀င်ရောက်နှောယှက်မှု့အားလည်းထိရောက်မှု့မရှိစေသောကြောင့် ကိုယ်၀န်မရနိုင်ပါ။ 1 ကြိမ်ထိုးခြင်းဖြင့် 1 လတာကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
ထိုးဆေသုံး၍ကိုယ်၀န်တားခြင်းကာကွယ်မှု့သည် ကွန်ဒုံးသုံးခြင်းထက် 99% ရာခိုင်နှုန်းထိရောက်မှု့ရှိသောနည်းဖြစ်သောကြောင့် ပိုမိုထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်ပါသည်။လိင်ဆက်ဆံနေစဉ် ပေါက်ထွက်မှု့အခွင့်အရေးမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆေးရုံသို့သွားစရာမလိုပဲဆေးခန်းများတွင်လည်းထိုးနိုင်ပါသည်။စျေးနှုန်းချိုသာ၍ ဆေးသောက်ရန်မေ့တတ်သောသူများအတွက်ထိုးဆေးနည်းသုံးခြင်းကပိုသင့်တော်ပါသည်။
ထိုးဆေသုံးခြင်းသည်ကိုယ်၀န်တားခြင်းတစ်မျိုးတည်းကိုသာကာကွယ်နိုင်ပြီးလိင်ဆက်ဆံခြင်းမှကူးစက်နိုင်သောရောဂါများမှ မကာကွယ်နိုင်သည့်အပြင်ထိုးဆေး၏ဆိုးကျိုးများဖြစ်သော ရာသီပုံမှန်မလာခြင်း မိန်မးဂိုလ်မှသွေးဆင်းခြင်း၊အချို့ ၌ခေါင်းမူးခြင်းနှင့်ရင်သားတင်းခြင်းများကိုလည်းမကာကွယ်နိုင်ပါ။
မွေးဖွားမှု့ကိုထိန်းချုပ်သောဆေးလုံးများ (Birth Control Pills)
သောက်ဆေးသုံး၍ကိုယ်၀န်တားခြင် ဆိုသည်မှာ ကိုယ်၀န်မရှိစေရန်ဆေးသောက်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်၀န်တားခြင်းဖြစ်ပြီး အမျိုးအစား2မျိုးရှိပါသည်။၄င်းတို့မှာ 21 ရက်နှင့် 28 ရက် တို့ဖြစ်ပြီးတစ်ကဒ်လျှင် 1 လကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ဒုတိယအမျိုးအစား2မှာအရေးပေါ်ကာကွယ်ဆေးဖြစ်သည့် တစ်ကဒ်လျှင်ဆေးနှစ်လုံးသာပါသည့်ဆေးဖြစ်ပါသည်။မရည်ရွယ်ပဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပြီး(သို့)အခြားကာကွယ်နည်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတ်သော အမှားအယွင်းများအတွက်ဖြစ်ပါသည်။
သောက်ဆေးသုံးခြင်း၏အားသာချက်မှာ ကိုယ်၀န်ရရှိခြင်းမှထိရောက်သောကာကွယ်မှု့နှင့်စျေးချိုပြီး၀ယ်ရလွယ်သည့်အပြင် ၄င်းသည်သားဉအိမ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေကိုလည်းလျော့နည်းစေသည့်အပြီး သားအိမ်ကင်ဆာ၊ ရာသီလာသောအခါဗိုက်အောင့်ခြင်းများကိုလည်းလျော့နည်းစေပါသည်။ တစ်ချို့ဆေးမျိုးစားများသည် ၀က်ခြံများကိုကုသရာတွင်လည်းကူညီနိုင်သည်။
ဆေးလုံးသောက်ခြင်းဖြင့်တားခြင်းသည် နေ့တိုင်းသောက်ရသောဆေးမျိုးဖြစ်သည် ဆေးသောက်ရန်မေ့ခြင်းသည် ကာကွယ်မှု့ကိုထိရောက်မှု့ကိုများစွာလျော့ကျနိုင်သောကြောင့် မရည်ရွယ်ပဲကိုယ်၀န်ရနိုင်ပါသည့်အပြင်ဆေးသောက်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများဖြစ်သော ဉပမာ သွေးထွက်ခြင်းများနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းများဖြစ်တတ်ပါသည်။
ထိုးဆေးသုံးခြင်းဖြစ်စေသောက်ဆေးသုံးခြင်းဖြစ်စေ ကာကွယ်မှု့ကိုထိရောက်မှု့များစွာရှိပါသည်။ သို့ပေမဲ့ တိကျသောကွဲပြားမှု့လည်းရှိပါသည်။၄င်းမှာထိုးဆေးသုံး၍တားခြင်းသည်ဆေးသောက်ရန်မေ့ခြင်းကြောင့်အသင့်မဖြစ်သောကိုယ်၀န်ရနိုင်မှု့အတွက်နှင့်နောက်ဆက်တွဲကြီးမားသောပြဿနာဖြစ်ပေါ်မည့်အတွက်ကိုမစိုးရိမ်ရပါ။ထို့ကြောင့် မည့်သည့်နည်းလမ်းသည်သင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်ကိုဂရုတစ်စိုက်ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ခြင်းသည်လျစ်လျူမရှု့သင့်သောအရေးပါသောအကောင်းဆုံးအချက်ဖြစ်ပါသည်။